I-3 Ihotele eNtsha eza kwakhiwa e-Istanbul Airport | RayHaber
ikhayaETURKEYSithili saseMarmara34 IstanbulIhotele eNtsha ye3 iza kwakhiwa kwisikhululo seenqwelomoya i-Istanbul
27 / 11 / 2019 34 Istanbul, JIKELELE, Airports, Highway, ZOMHLATHI, Sithili saseMarmara, ETURKEY
ihotele entsha eza kwakhiwa kwisikhululo seenqwelomoya i-istanbul
Kwenziwa isicelo se-EIA ukuze iihotele zibekhona kwiSikhululo senqwelomoya esiya kumiliselwa ecaleni kwesikhululo seenqwelomoya i-Istanbul esasungulwa e-Arnavutköy. Amawaka amagumbi e-750 aya kuqhuba i-25 unyaka wonke kwi-IGA.
Ukuphathwa kwesikhululo seenqwelomoya i-IGA kuya kwakha iihotele ezintathu ngotyalo mali lwe-25 yezigidi zeepawundi kumhlaba oqeshiselwe i-255 kunyaka e-Istanbul Airport.
IGA yasungulwa ngo-Okthobha i-25 nguKalyon - Cengiz - Imephu - Iqela leLent Joint Venture ukwakha i-Istanbul Airport kwaye isebenze i-7 unyaka wonke.
Ngokwifayile yokubonisa ye-IGA, eyenze isicelo kwi-Ofisi yoMphathiswa Wezendalo kunye nokuHlaliswa koVavanyo lweMpembelelo yokusiNgqongileyo (i-EIA), iprojekthi yehotele ecwangcisiweyo ukuba yakhiwe ngaphakathi kweprojekthi ye-Istanbul Airport yecandelo lokucwangcisa ukulungiselela ukumiliselwa okuhlukeneyo.
Indawo iyonke ye-IGA Airport City Hotel icwangcisiwe ukuba ibe zii-39 ezili-569 ezili-skwere. Ngokuhambelana,
Ihotele ye-3 Star; I-5 iza kubandakanya amagumbi e-506, iivenkile zokutyela, imivalo ye-cafe kunye namagumbi endibano kwindawo yemitha enye yesikwere ye-631. I-3 yehotele yokuhlamba iimpahla kunye neenkonzo zokupaka ziya kwabelwane ngehotele yeenkwenkwezi ye-4.
Ihotele ye-4 Star; I-4 iza kubandakanya amagumbi e-506, iresityu yesibini, iindawo zokuzilolonga umzimba, ukongeza kwiinkonzo kwihotele yeenkwenkwezi ye-564 kwindawo yeemitha ezili-3. Kuya kubakho indawo yokubhukuda engaphakathi kwisiza.
Ihotele ye-5 Star kunye neBallroom; Igumbi le-5 kwigumbi le-214 lamawaka e-555, iimitha ezili-4 ezili-4 ze-skwere ze-394 zesikwere esine-1500 indawo yokubeka ziya kubakho ukongeza kwiinkonzo zehotele ye-3. Kuya kubakho iimpahla kunye neenkonzo zokucoca ezomileyo ezizimeleyo ze-4 kunye neehotele zeenkwenkwezi ze-XNUMX.
Ihotele ye-IGA Airport City iya kuba namagumbi ali-750 ayinkulungwane ngokobukhulu obahlukeneyo.
Ukwakhiwa kwayo kucwangcisiwe ukuthatha malunga neenyanga ze-30 kwaye ixabiso lotyalo mali kulindeleke ukuba libe li-255 yezigidi zeepawundi.
Ihotele yeSikhululo seenqwelomoya i-IGA iya kusebenza i-IGA ixesha elingangonyaka ngokuhambelana nesivumelwano esikhulu esisayinwe nguGunyaziwe weZikhululo zeenqwelo moya. I-25 iya kuba nomqhubi omtsha ngokweemeko zosuku emva konyaka okanye ukuba kufinyelelwe kwisivumelwano, iya kuqhubeka kunye nomqhubi omnye. (Sözcü)
Imigca emibini yeMetro iza kwakhiwa eBursa
Isiteshi sokwakhiwa kwisiXeko soLungiso lwe-Istanbul
Umzila weThutho loThuthi oThuthiweyo wokwakhiwa
I-1 ene-SATSO. Indlela eNtsha ephakathi kwe-OSB…
Turkey, 10 749 nyaka zezi: Km New Highway Construction
225 amawaka abantu xa ukuMda weSikhululo senqwelomoya ...
UMphathiswa uTurhan: Nge-Istanbul kwisikhululo senqwelomoya esitsha
Ihotele yeHlathi yeHluma yeHluma ekulungele ukuhamba
I-CHP ibuze ukuba u-Thompson 'Haydarpasa Railway Station Hotel wenze ntoni?'
Iprojekthi ye-Channel Istanbul icinyiwe? UMegan ...
Isitishi sikaloliwe saseMedina Esiphezulu seYapı
Izixhobo zeBharans Global Logistics, i-30 yezigidi zeDollar…
IIShedyuli zoTyelelo kunye noLwazi lwendlela kwiiMephu zikaGoogle
UMongameli Seecer unombulelo kuMqhubi weHero